Guddoomiyaha maxkamadda C.Q. “Sababaha amaan darida Muqdisho waa ciidamadii oo aan loo dirin howlgal iyo …” (dhegayso) – Radio Daljir
Guddoomiyaha maxkamadda C.Q. “Sababaha amaan darida Muqdisho waa ciidamadii oo aan loo dirin howlgal iyo …” (dhegayso)
Seteembar 26, 2018 5:31 b 0
Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute ayaa waxaa uu ka hadlay asbaabta ammaanka Muqdisho loogu guulaysan la’yahay iyo sababaha dilalka ay usoo kordhayaan loo gaysanayo dadka shacabka.
“Haddii aan howlgal la qaadin, askarigana aan loo dirin dagaalka cadawga waxaa dhacaya in ammaanka uu xumaado , ciidanku dilka ay u gaystaan gabadha sagaal jirka ah, waxaana ay dan ay u tahay kooxaha dhibaatada wada oo fursad u helaya ciidamadan iska fadhiya” ayuu yiri guddoomiyaha.
Magalada Muqdisho dilal ayaa kadcayay todobaadkii lasoo dhaafay , taasi oo ay shacabku ka argagaxeen.
Wasiir Qarjab “Amniga Puntland 85% waa uu suganyahay, dad baana u xiran dilkii Bosaso”
Yaa Dilay Aamina Xusseen Xassan oo ahayd gabadh fasalkeeda jaamacadda lagu dhex toogtay ?